I-Bentley Connection Event - i-Geofumadas
NgoJuni, 2015 Ukufundisa i-CAD / GIS, ezintsha, Microstation-Bentley
Imveliso emikhulu ye-Bentley Systems ibe kude kube ngoku, i-Microstation, i-ProjectWise ne-AssetWise kwaye ukusuka kulo iyakwenza isibonelelo sayo kwiindawo ezahlukeneyo zeGo-Engineering. Njengoko ndakuxelele unyaka odlulileyo, iBentley ifake ukubheja kweyesine kwizinto azibiza ngokuba yi-Connnect.
Phakathi Meyi nangoNovemba 2015, uya kuba bewasa isiganeko enkulu kokuxhuma iingcali amashishini geo-zobunjineli apho Bentley Systems uye izisombululo. Esi siganeko ihlala iintsuku ezimbini iza kuqhutywa imizi 30, apho ngaphezu 200 60 sebenzisa amatyala kunye neentetho ephambili phantsi nenguqulelo ezintsha ze Bentley ziza kuboniswa: khetha indibaniselwano EDITION.
Imihla yeziganeko zilandelayo:
Philadelphia 18-19 Meyi I-Chicago 19-20 Meyi I-Oslo 19-20 Meyi Amsterdam 20-21 Meyi I-Toronto 21-22 Meyi I-Atlanta 2-3 Juni Paris 2-3 Juni I-Singapore 3-4 Juni
Los Angeles 4-5 Juni I-Chennai 9-10 Juni I-Milano 9-10 Juni Prague 10-11 Juni EHoston I-Madrid 16-17 NgoJuni UMasipala waseMexico 23-24 Juni I-Manchester 29-30 NgoJuni
Wiesbaden 1-2 Julayi Seoul 14-15 Julayi I-Tokyo 16-17 Julayi Beijing 6-7 Agasti I-Johannesburg 18-19 Agasti Brisbane 19-20 Agasti I-Sao Paulo 25-26 Agasti Mumbai 26-27 Agasti
I-Calgary 2-3 Septemba IWarsaw 29-30 Septemba Helsinki 6-7 Oktobha Zhengzhou 15-16 Oktobha Dubai 23-24 Novemba EMoscow Umhla usalinde.
Njengoko uyakubona, uBentley uphonsa indlu ngaphandle kwefestile le semester, efuna ukubonakala kweqhinga apho iMicrosoft eyona mxhasi oyintloko. Akukho nto esingazange siyicinge ngaphambili, kwaye ngokuqinisekileyo kuya kunika izibane ezitsha kumcimbi omkhulu waseLondon ekupheleni konyaka. Kucacile ukuba lo mcimbi uza kuba nokunikezela ngokusesikweni indlela software nje inkonzo, nto leyo etshintsha ngokupheleleyo indlela mvume sele iimveliso Bentley kwaye ngoku enokumelana eziqhubekayo ehlabathini.
Kwimeko yamazwe e-Ibero-America, kuya kuba neziganeko eMadrid, eMexico naseSao Paulo, ngemihla eboniswe ngasentla.
Kubalulekile ukubhalisa, ukuba ulindele ukuba uqaphele indlela apho ubuchwepheshe buhamba khona kumjikelezo wobomi bezibonelelo. Njengomzekelo, ndiya kukunika i-ajenda yaseMexico eya kuba yi-23 kunye ne-24 iintsuku zikaJuni.
Isingeniso kwi-CONNECT Edition
UAlfredo Castrejón, uMongameli weLatin America, iBentley Systems
UQHUBELELO LWOKUXHUMANA: Umboniso omtsha ekuphunyezweni kweeprojekthi
Fumana indlela yokuguqula ukuphunyezwa kweeprojekthi zakho. Kungakhathaliseki ukuba yintoni indima yakho kwiprojekthi yokuyila okanye yokwakha kwaye kungakhathaliseki ubungakanani beprojekthi yakho, funda indlela yokwandisa umveliso wakho ngamnye kunye nokwenza lula ukusebenzisana kulo lonke iphrojekthi kunye nabo bonke abathathi-nxaxheba. Ukuphucula ukusetyenziswa projekthi iza kwandisa ubuchule babo ukunika iinkonzo kwiqondo eliphezulu izakhiwo, iibhulorho, iindlela, izityalo amandla, uthungelwano inkonzo, emigodini kunye nezinye iiprojekthi zeziseko ngendlela ngexesha, ngoqingqo-mali kunye lomngcipheko ngaphantsi.
I-CONNECT Edition yi-software ye-Bentley yesizukulwana esilandelayo, esiza kusungula ipaladigm entsha ekusebenzeni kweprojekthi.
Funda malunga novelwano UQHUBELELO LWOKUQINISWA KWE-MicroStation, ProjectWise ne-Navigator. Fumana indlela ezi zinto zisebenzise ngayo izinto eziphathekayo zeteknoloji zakutshanje, ezifana neenkonzo zefu, ukuthintela, ukuhamba, njl.
UPhil Christensen, uMongameli we-Marine kunye ne-Offshore, i-Bentley Systems
Ulawulo lojikelezo lobomi beziseko zikawonkewonke
Uphuhliso kukhokelela ekwandeni kwemfuno resource ivunywa sendyebo kweenkqubo zolawulo lwee-asethi emsebenzini, ukulawula iinkqubo ezintsonkothileyo efunekayo ukuze kuqhutywe udityaniso ezahlukeneyo-asethi zezakhiwo. Ezi ulawulo Iindlela asethi anike inkxaso yeziseko yasezidolophini neendlela, imizila kaloliwe, iinkqubo esiporweni, iinkqubo umjelo nezityalo unyango, uthungelwano kunye nezityalo ukucocwa kwamanzi amdaka networks, umbane negesi, uthungelwano zonxibelelwano , ii-airports, ipaki, izakhiwo zikawonkewonke kunye nokulawulwa komhlaba, phakathi kwabanye. Funda indlela izisombululo zeBentley ezinokuthi zenze igalelo ekulawuleni nasekugcinweni kweziseko zesezidolophini kwaye zinike iinkonzo kumasebe oomsebenzi karhulumente, kwiinkonzo zikawonkewonke ezilawulwa oomasipala nakwii-arhente zengingqi, zengingqi kunye neyelizwe kulo lonke ujikelezo yobomi bezinto.
U-Alfredo Contreras, uMlawuli oyiNtloko weMveliso, iBentley Systems
I-BIM yezixeko: Ukususela kwimodeli ukuya kwinyani
Ngenxa yobume obunzima beeprojekthi zekarhulumente kunye neemfuno zentsebenziswano kubathathi-nxaxheba kuzo zonke iiprogram kunye neeprojekthi, ezininzi izixeko ziyamkela iinkqubo ze-BIM ukuba zibe zixeko ezizinzileyo.
Bentley wakhiwe ngendlela abekwe ukubonelela ngesisombululo BIM wokwenene-amandla, ukusukela ukuba 3D nokuthelekelela ukuya nokunikwa kuyilo ukuya nokuhlalutya iinketho ukuphucula ukusebenza kunye nokuphunyezwa eziphuculweyo projekthi ukuhlanganisa imiba kumaxabiso ahambelanayo ukufumana imodeli epheleleyo yedatha kunye ne-immersive kulo lonke ujikelezo lobomi lwezinto.
UFernando Lazcano, iNjineli yeSicelo, iBentley Systems
I-Federated SIG enegunya leBentley Imephu
Oomasipala, ii-arhente zikarhulumente, eziluncedo, ii-arhente zothutho, cadastre kunye neenkampani nemephu uxhomekeke iimveliso iinkonzo ukuhlola GIS, umfanekiso, mapping, uhlalutyo, imaphu kunye neminye imisebenzi yesiqhelo geospatial. Intsebenziswano kunye nentsebenziswano phakathi kwamasebe kamasipala kunye nomthombo omnye wedatha kunokuba ngumngeni onzima. Ukusetyenziswa kwe-GIS eqinisekisiwe eyenzela umthombo omnye wenyaniso kuphucula ukuphunyezwa kweprojekthi kunye nokulingana kolwazi. Olu hlobo nkqubo inceda ukunyanga ukwanda ngokukhawuleza kweziseko ezidolophini kunye nokuphuculwa iinkqubo zolwazi cadastral ukuqinisekisa ukuba amasebe ezahlukeneyo bayafikelela imaphu oluchanekileyo kunye data cadastral. I-Bentley inikeza amandla okuqala weGIS ngeeklasi zeemveliso ze-geospatial
yenzelwe ukujamelana nale mingeni.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukwakha i-Dron, iprojekthi yezesayensi yam
Post Next Inani elikhuni le-Top 40 Geospatial kwi-TwitterOkulandelayo "